50 Astaamo ay ku qoran tahay fariin qarsoon / macno leh | Abuurista khadka tooska ah
Tani waa mid ka mid ah uruurinta aan runtii jeclahay, maadaama ay noo ogolaadeen inaan ku raaxeysano caqligeena si dhakhso leh loo qeexo macnaha B ee astaamaha aan hoos ku arki karno.
Waxaa jira wax kasta oo ka mid ah, laga bilaabo qolka jimicsiga dumarka, qufulo aan ka fileyn iyaga, maqas ay ku jiraan shaaribno lagu dhex dhisay, ama muraayadaha oo si lama filaan ah isugu beddelaya dhalooyinka khamriga ee miiska saaran
1 1) Shirkadda Doghouse Brewing Co.
2 2) Guurka
3 3) Waqtiga Pizza
4 4) daruur daruur
5 5) Shinida
6 6) Jidh dilid
7 7) Clip Jaceyl
8 8) Duuli
9 9) Fitmis
10 10) Isku laab
11 11) Qoysaska
12 12) Beerta Golf
13 13) Aasaaska Wadnaha
14 14) Wakiilo aan muuqan karin
15 15) Waxsoosaarkii ladilay
16 16) Qufulka
17 17) Dukaan Mister
18 18) Khamri Raadiyaha
19 19) Bandhigga Cuntada & Khamriga ee Newcastle
21 21) Baloon kariye
22 22) Soosaarka Cowbra
23 23) MagaaladaCliq
24 24) Qod qoda Saint Michael
25 25) Dharka Duck Iron
26 26) Duugga
27 27) Guriga Martini
28 28) Filimurbia
29 29) Duurjoogta
30 30) Bisad madow
31 31) Farta Maskaxda
32 32) Ugaarso Media
33 33) Wax-qabad
34 34) Gantaal Golf
35 35) Dalool
36 36) Awooda indhaha
38 38) Qofka la dilo
39 39) Boqortooyada Biyaha
40 40) lumay
41 41) Duubista muusigga
42 42) Duunyada
43 43) Adeegga Biyaano ee Wiesinger
44 44) VinoPiano dhadhan macaan
45 45) Muusigga Qoorta Dheer
46 46) Duurjoogta
47 47) Duuliye CMS
48 48) Kooxda Filimada naxdinta leh
49 49) Qofka wax daloola
50 50) Dhibic biyo
1) Doghouse Farshaxanka Co.
Astaantan ayaa adeegsaneysa meel taban. Sida magaca oo kale, waxaan aragnaa guri eey ah, iyo walxaha wax lagu karsado waxaa lagu darayaa astaanta iyadoo leh galaas biir ah oo qaab qaab ah u galaya eeyga (kaas oo ku habboon mugga gacantiisa iyo istaaggiisa).
Isticmaal kale oo ah meel bannaan. Godadka u dhexeeya lugaha M dhab ahaantii waa dad gacmaha is haysta, oo muujinaya waxa xafiisyada meherku u taagan yihiin - ka caawinta dadka inay is helaan oo jacayl yeeshaan.
3) Waqtiga Pizza
Boodhadhka saacaddu runtii waa pizza, sidaa darteed waa nooc la mid ah sida gacanta saacaddu u leedahay: “Waa waqtigii pizza”.
4) daruur daruur
Daruuruhu way wareegsan yihiin, laakiin geesooyin baa qallalan; geeska halkan ayaa si fiican looga soocay dariiqa wareega wareega ah. Sidoo kale, midabada magaca ayaa si fiican uga muuqda daruurta iyo geesaheeda.
Qaabka B waxaa sameeya raxan shinni ah.
6) Jidh dilid
Dadku waxay xiriir la leeyihiin fasaxa safarka, sidaas darteed boorsadan safarku runti waa biir lagu cabbo, oo leh gacamo iyo giraangiraha - oo si fiican uga tarjumaya magaca astaanta.
7) Clip Jaceyl
Qaabka astaantu waa qalbi, oo u taagan qaybta “jacaylka” ee magaca, waxaana laga sameeyay clip, oo dabcan u taagan qaybta “clip”.
Midkani runtii wuu fiican yahay. Qaabkeedu waa xaraf “F” ah, oo isla meerto ah si markaa loo xusuusiyo diyaaradda hawada ee hawada ku jirta.
Astaanta Fitmiss wuxuu isku daraa laba qaab: barbells iyo calaamada galmada dumarka. Dabcan, qaabka barbells wuxuu u taagan yahay qeybta "fit (ness)", calaamada galmada dheddiguna waxay u taagan tahay "miss".
10) Isku laab
Astaanta calaamaddu waa warqad duuban oo “F” ah. Ma noqon karto mid sii cad.
Kani waa weyn yahay: qaybta dhexe ee ereyga "qoysaska", xarfaha "i", "l", iyo "i" runti waa qaabab aad loo fududeeyay oo dadka ah. Midka ugu weyni waa aabaha, dhex dhexaadkuna waa hooyada, tan ugu yarna waa ilmo - qoys.
12) Beerta Golf
Qaabka astaantu waa geed, laakiin leh ul golf sida jirridda geedka.
13) Aasaaska Wadnaha
Astaantu waa majarafad (taas oo la xiriirta dhismaha) wadna leh dhamaadka. Marka adigaa jira, qalbi + dhisid.
14) Wakiilada aan muuqan
Kani waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad: khadadkaasi waxay u egyihiin isku mid. Ku dhowaad, maxaa yeelay midka dhexe waxyar wuu ka duwan yahay, waa qaab-xirmeed. Ugu horreyntii, wakiilladu waxay xirtaan xirmooyinka :). Marka labaad, wakiilka wanaagsan wuxuu ku dhex milmi karaa wax aad u wanaagsan oo runtii ay adag tahay in la arko isaga. Taasina waa waxa farqiga khadka dhexe ee khiyaanada ahi u taagan yahay.
15) Waxsoosaarkii ladilay
“I” ee “ladilay” erayga ayaa dhulka yaal. Sida oo kale, si fiican, loo dilay :).
Midkani waa mid adag oo sharraxaad ah. Waad ogtahay in qufulku kujiro waxyaalaha yaryar ee kiciya gudaha dhexdooda, oo markaad furaha furaysid, kicintaas way rogmaysaa, taas oo keenaysa inuu xirmo. Haddaba, fiiri xarfaha "o" iyo "c". Dhawaaqaas gambaleel?
17) Dukaan Mister
Mister Cutts macno ahaan IS astaanta. Waxay umuuqataa mister leh muraayadaha indhaha iyo shaarubaha, laakiin taasi runti waa maqas is rogroga.
18) Khamri Raadiyaha
Magaca halkan ayaa si fiican uga tarjumaya qaabka. Qaabku wuxuu ka kooban yahay laba dhalo oo khamri ah, laakiin aan lahayn khadadka gudaha. Tani waxay ka dhigeysaa inay u egtahay muraayadaha indhaha - waxaadna inta badan gashataa muraayadaha indhaha markaad wax raadineyso.
19) Bandhigga Cuntada & Khamriga ee Newcastle
Isticmaal kale oo hal abuur leh oo ah meel bannaan. Qaabka cad waa fargeeto, oo u taagan qaybta “cuntada”, iyo ilkaha fargeeto waa qaababka dhalooyinka khamriga, oo dabcan u taagan qaybta “khamriga”.
Koob kafee ah oo laga sameeyay filim duubis. Yup, Koob shaneemo Kafeega ah.
21) Baloon kariye
Buufinku dhab ahaantii waa koofiyad cunto kariye, dambiilaha buufintuna waa buskudka cunto-kariye ay ku xiran yihiin yutiilitiyada korontada.
22) Soosaarka Cowbra
Ciyaar ereyo ah. Astaantu waa a lo'da, laakiin leh zebra karbaashyo; ilaa Cow-Bra.
Magaalada halkan runti waa tilmaame gacan ah oo aan ku aragno kumbuyuutarrada, oo jilaynaya "guji" qorraxda ka sareysa magaalada.
24) Qod qoda Saint Michael
Majarafad kale halkan. Majarafad lafteedu waxay u taagan tahay qaybta "qod". Waxaa laga sameeyaa laba walxood oo dadku caadi ahaan la midoobaan quduusiinta: iskutallaab, iyo daaqadaha muraayadaha muraayadaha leh ee aad badanaa ku aragtid kaniisadaha.
25) Dharka Duck Iron
Qaybta "dharka" waxaa ka muuqda hang. Inta badan laalaada waxaa laga sameeyaa bir, oo lagu daro waxay leedahay jillaab qaab eg. Marka waa bir duub bir ah. Marka waa Dhar Duck Birta.
Mid wanaagsan, ciyaar kale oo ereyo ah. "Daanyeer" wuxuu ku dhexjiraa eray "fure" horeyba, markaa ma jiri karin astaan ​​ka sii cad oo aan aheyn furaha leh madaxa qaab daanyeer.
27) Guriga Martini
Haddana adeegsi kale oo hal abuur leh oo ah meel bannaan. Waxaan aragnaa laba muraayadaha martini oo taagan midig midba midka kale - oo ka dhigaya inta u dhexeysa iyaga guri. Halkaasna waxaad tagtaa, Guriga Martini.
Astaantan ayaa ah isku-dhafka wanaagsan ee fikradaha ka imanaya astaamaha CinemaCafe iyo CityCliq. Magaalada halkan ku taal, dhismayaasha inay sax yihiin, waxaa laga sameeyaa filim filim sidoo kale.
Hal ciyaar oo ereyo ah. Magaca waa isku darka ereyada "kimistariga" iyo "geed". Markaa sumaddu waxay ka tarjumaysaa geedkan yaabka leh - jirku dhab ahaantii waa tuubbo tijaabo ah, iyo daruuro qiiq ah oo badanaa lagu soo saaro tijaabooyinka kiimikada ayaa matalaya laamaha sare.
30) Bisad madow
Mid ka mid ah kuwa ugu cadcad. Marka ugu horeysa ee aad fiiriso, waxaad dhihi kartaa "wax malana halkan". Kaliya laba erey, oo laga saaray magaca, oo wareega 90. Waxba kama jiraan, sax? Khalad! Fiiri xarfaha "C" labada erayba. Dhab ahaantii waa indho bisad :).
31) Farta Maskaxda
Farta oo lagu daabacay qaab maskaxeed, far-maskaxeed.
32) Ugaarso Media
Waan jeclahay fikradda halkan ka jirta, midkani wuxuu kicin karaa macno ahaan ururo maskaxdeenna ka jira. Astaantu waa U-qaabeysan, taas oo si muuqata uga tarjumeysa qeybta “uReach” ee magaca. Sidoo kale, xarafka "u" waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa beddelka "adiga". “U” wuxuu leeyahay gacmo labada dhinacba, taas oo maskaxdeena ku kicinaysa isku xirnaan macno leh: u fidin wax. Markaa waxay lamid tahay “inaad gaadho warbaahin” -> uReach Media.
Ka saar mid muuqda. Astaanta ayaa ah "e" fiilo koronto oo qaabeysan oo leh caleen dhamaadka. "E" waxay u taagan tahay "eco", iyo xarigga "tamarta". Eco-Tamarta.
Isticmaalka xun ee meel taban. Qaybta "golf" waxay ka muuqataa laba shaah. Meelaha u dhexeeya ilkahaas waxay u egyihiin gantaal, oo ka tarjumaya qaybta "gantaal" magaca si cad.
Mid aad u fudud. Xarafka "O" ee ka baxsan erayga "dalool" waa… godka :).
36) Awooda indhaha
Jir dhise kor u qaada xarkaha. Kaliya xarkaha runti ma ahan barbell, laakiin muraayadaha indhaha, oo u taagan "indhaha".
Mid weyn halkan, kan aan ugu jeclahay ururintan. Magaca waa "Evolution X", astaanta astaantana waxaan si macno leh u arki karnaa "X" oo ka soo laabaneysa hal xariiq gaaban, una socota qaab dhammaystiran "X".
Khamriga biirka ayaa u taagan qaybta "bar", waxayna ku leedahay qaab barcode ah. Ma helayo wax intaas ka sii cad, ma sameyneysaa.
39) Boqortooyada Biyaha
Markaad maqasho "boqortooyo", waxaad maqleysaa "boqorka". Markaad maqashidna "boqorka", waxaad kafekeraysaa taaj. Taajka halkan wuxuu ka samaysan yahay biyo, sidaas darteedna wuxuu u taagan yahay magaca: Boqortooyada Biyaha.
Mid kale oo la ciyaara ururada. Markii qof lumo, waxaad u baahan tahay wax aad ka hesho, sida ugu fiican haddii ay tahay wax gaar ah oo tilmaamaya qofkaas, iyo qofkaas oo keliya. Maxaa ka duwan farta farta?
41) Muusikada shaydaanka
Waxaad maqleysaa "muusig", isla markiiba waxaad ka fekeraysaa qoraallo iyo dugaag. Astaanta halkan ku taal waa cuf, oo geesaha dusha sare leh. Waxaad maqleysaa "sheydaan", waxaadna ka fikirtaa geesaha dabcan. Dheeraad ah, culeysku waa casaan, kaas oo sidoo kale badanaa la xidhiidha sheydaanka.
Aad isugu eg. Ey, oo kaliya leh qoraallada muusikada halkii lugaha; ilaa Codka-Eyga.
43) Adeegga Piano Music Wiesinger
Astaantan ayaa adeegsaneysa meel taban. Waraaqaha "W" iyo "M" waa xarfaha ugu horreeya ee ereyada "Wiesinger" iyo "Music" magaca. Labadaas xaraf waxay sameystaan ​​furayaal biyaano, oo sida muuqata ka tarjumaya qeybta “adeegga biyaano”.
44) VinoPiano dhadhan macaan
La mid ah midka kore, wax yar uun baa ka duwan. Astaantu waxay ka kooban tahay saddex dhalo oo khamri ah, waxay ka tarjumayaan qaybta "khamriga". Meesha cad ee u dhaxeysa iyaga oo leh dhalooyin ayaa sameeya furayaasha biyaano, oo u taagan qeybta "biyaano".
45) Muusikada Qoorta Dheer
Mid qosol badan :). Waa maxay muusiggu? Ogeysiis! Oo haddaba halkan astaanta ayaa ah qoraal, kaliya qoraalka ayaa ku dhammaanaya… madaxa giraafiga. Intaa waxaa dheer, lab iyo labba waxay wadaagaan qaybta "qoorta". Muusikada Qoorta Dheer.
Isticmaal meel kale oo xun. Halkan, labadaba "P" warqadda iyo booska ku dhex yaal, oo umuuqda mid u eg pelican, ayaa u taagan magaca - Pelican.
47) Duuliye CMS
Eray "duuliye" ah, oo leh qayb diyaarad u eg. Nadiifi Crystal :).
48) Kooxda Filimada naxdinta leh
Astaan ​​kale oo qosol badan. Ereyga “O” ee “naxdinta leh” wuxuu umuuqdaa mid qiiro leh oo aan wada ognahay - laba indhood iyo af ballaaran oo furan. Naxdin, daanka daatay, haddii aad rabto.
49) Qofka wax daloola
Astaantu waa astaan-caan ah, iyada kaliya waxay leedahay gambaleel u eg shaashad. Marka halkaas ayaad u socotaa, oo si fiican uga tarjumeysa ereyada "shutter" iyo "bug".
50) Dhibic biyo
Meel xun mar kale. “W” waxay u taagan tahay “biyo”, iyo inta u dhexeysa qeybta hoose ee lugaha W dhab ahaantii waa dhibic biyo ah -> W-dhibic -> Drop Water.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 50 Astaamo ay ku qoran tahay fariin qarsoon / macno leh
Gabriel G.R.G. dijo
Astaamahan runti aad ayey u fiican yihiin, waxaad arki kartaa inay jirto hal-abuur wanaagsan!
Jawaab Gabriel GRG
25 liistada hoos u dhigista ee lagu sameeyay jQuery